ကျွန်ုပ်နှင့် ကိုမောင်ဂျော်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကျွန်ုပ်နှင့် ကိုမောင်ဂျော်များ
Posted by ဂျစ်စူ on Jul 27, 2011 in Aha! Jokes, Satire | 18 comments
ကျနော်ကြုံဖူးခဲ့တဲ့ ဂျော်တကီး များရဲ့ ကျနော့်ကို နှောင့်ယှက် ပုံအမျိုးမျိုးကို ပြန်လည်ဖောက်သည်ချလိုက်တာပါ။ဂျော်တကီးဆိုတာ ကျနော်တို့ အရပ်သုံး ဂျော်ကယ်(Gay) ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်လူငယ်တွေ တော့ သူ့ အရပ်နဲ့ သူ (Gay) ကို အမည်အမျိုးမျိုး တပ်ခေါ်နေကြတာပဲ။ဂျီပုန်း၊ဂျယ်၊ဂျော်တကီး…ဂျော်ကယ်..စသဖြင့် များကြီး ခေါ်ကြပါတယ်။ကျနော်တို့ 
အရပ်က သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အခြောက်ကို ဂျော်တကီးဟု ခေါ်ကြသည်ပေါ့ဗျာ။ထား..ပါလေ…ဒင်းတို့စိတ်ဒုက္ခပေးတာကို ပြောပြပါဦးမယ်။
ကျနော်(၈)တန်း (၉)တန်း ကျောင်းသား ဘ၀ ထင်ပါတယ်။ကျောင်းသွားခါနီး မနက်စာ စားစရာမရှိလို့ပြည်လမ်းပေါ်တက်၊အနီးဆုံး လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ပြေးပြီး မနက်စာ စားဖို့ ပါဆယ် သွားထုပ်ပြီး ပြန်လာတဲ့အချိန်။မျက်နှာချင်းဆိုင်က အသက် (၄၀ )ကျော် (၅၀) လောက်ရှိမယ့် ခပ်၀၀.သန့် သန့် သန့် ပြန့် ပြန့် ပဲ ၀တ်စားထားတဲ့ ဘိုးတော်နဲ့တဲ့တဲ့ တိုးပါတယ်။ကျနော်လဲ ကျောင်းဝတ်စုံလေးနဲ့ပါဆယ်ထုတ်လေးဆွဲလျက်ပေါ့..သူ့ ကြည့်ရတာ တစ်ခုခုအကူအညီလိုသလို အမူအရာမိုလို့ကျနော်လဲ သတိထားပြီး လျှောက်လာလျက်ပေါ့။အနားရောက်တော့ လက်လှမ်းတားပြီး ကျနော့်ကို ခေါ်မေးပါတယ်။
“သားလေး..လပြည့် လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ဘယ်နားမှာလဲ”
ကျနော်လဲ မုန့် ဝယ်လာတဲ့ ဆိုင်မိုလို့နောက်ကြောင်းမှာရှိတဲ့ လပြည့် ဆိုင်ကို ညွှန်လိုက်ပါတယ်
ဖြေပြီး ကူညီပြီးပြီမို့ထွက်လာဖို့ ပြင်တုန်း
“သားက ဘယ်မှာနေတာလဲ..ဘယ်ကျေင်းမှာ တက်နေတာလဲ”
“ဒီနားကပဲ..ကျောင်းလဲ အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးဘူးဂျ”လို့ဖြေနေတုန်း ဘိုးတော် လက်က ကျနော့် ပေါင်ကြား ရောက်လာကော..
“သြော်..ဘယ်နှစ်တန်းရှိပြီတုန်းကွ…ဘာတွေဝယ်လာတုန်း..”..ပေါက်ကရ လျှောက်မေးပြီး လက်က အငြိမ်မနေဘူး..ဖြစ်နေလို့ ..ကျနော်လဲ
“ကိုးတန်းတက်နေတာပါ..နောက်ကျနေလို့ ..သွားတော့မယ်..”ဟူ၍ နောက်ကြောလှည့်မကြည့်ပဲ အမြန်သုတ်ချေတင်ပါတော့တယ်။
စိတ်ထဲမတော့ .ဘယ့်နှယ် ဒီအဖိုးကြီး..
သူ့ ကြည့်တော့ အင်္ကျီအဖြူ..ပလေကပ်ပုဆိုးနဲ့လူကြီးလူကောင်းလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ..တောင်ဝှေးတစ်ချောင်းဆွဲ..
လမ်းလျှောက်ထွက်လာရာက..စောစောစီးစီး နှာ လာထ နေပါလားလို့စဉ်းစားမိတယ်။
အရပ်ကအရှည်ကြီး..ထန်းပန်ကြီးကြနေတာပဲ..ပဲပြုတ်တောင်းခါးကြားညှပ်ပြီး ပဲပြုတ်-ပဲကတ္တီပါပြုတ် တကြော်ကြော်ရောင်းနေတဲ့ အခြောက်..ပုံက ကြောက်စရာကြီး..
ညနေကနေ ညဘက်ထိ မကုန်မချင်းလိုက်ရောင်းတာလား မသိပါဘူး..ကျနော်လဲ ကျူရှင်ပြန်ရင် နဲနဲ မိုးချုပ်တယ်…ပြန်ရတဲ့လမ်းက လူရှင်းတဲ့လမ်း..မောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေတာကြီးကို။
ကျူရှင်ပြီးလို့ ပြန်ရင် ဘုရားစာ ရွတ်ပြီးပြန်ပြန်နေရတယ်.သရဲကြောက်လို့ .ခုထိလဲ သရဲကြောက်တုန်းပဲ။ နောက်မှ သရဲထက်ကြောက်ဖို့ ကောင်းခဲ့တာ ပဲပြုတ်ဂျော်ဂျော် မှန်း သိတော့တယ်။ကိုယ်ပြန်တဲ့အချိန်နဲ့ ပဲပြုတ်သည်အခြောက် ပဲပြုတ်ရောင်းကုန်လို့အိမ်ပြန်တဲ့အချိန်က ကိုက်နေသလား မသိပါဘူး။ပြန်ပြီဆို
အနောက်က လိုက်လာပြီ..ခြေလှမ်းကြဲကြီးနဲ့ ..ဘာသံမှလဲ မပေး..ခြေသံလဲ မကြားရ..ပဲပြုတ်ပါဆိုပြီးလဲ မအော်ပဲ.အနောက်ကနေ ခြေလှမ်းကြဲကြီးနဲ့လိုက်လာတာ..။အောင်မငှီးပဲ..ကျနော်လဲ လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နဲ့သုတ်ရတယ်..ကိုယ့်ကိုယ် မီကာနီးပြီဆို ပြေးသည်ပဲ။ခြေလှမ်းကြဲကြီးက မီသွားနိုင်တယ်..မဖြစ်ဘူး..လေးငါး ခါ ကြုံတယ်..လေးငါးခါ ပြေးရတာပဲ…အမီမခံနိုင်ဘူး။သြော်..
ပဲပြုတ်ဂျော်ဂျော် ရန်ကလဲ မသေးပါကလား..။သူ့ လမ်းနဲ့ငါ့လမ်း တခြားဆီကို နောက်က ဘာလိုက်လုပ်မှန်းမသိ..စိတ်လေတယ်။
Top Center က ဂျော်ဂျော်..
လူစည်ကားရာ (၈)မိုင်လမ်းဆုံ၊စတိုးဆိုင်တွေအရှေ့ 
လူရှေ့ သူရှေ့ဂျောက်ဂျက်ခွဲတဲ့ အခြောက်…ဒီကောင်လဲမလွယ်ဘူး..ဘယ့်နှယ်ဗျာ..
လူရှုပ်တဲ့နေရာမှာ ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ပေါ်တင်ကြီး အ၀ှာကို လာပုတ်သွားတယ်..
ဟိတ်အသဲလေး.” ဘုတ်..” ဆိုပုတ်သွားပြီး ခပ်တည်တည်လစ်သွားကော
ကျနော်လဲ ဘတ်ခနဲဆို အောင်မငှီးပေါ့..နာလိုက်တာ..ပေါ့..
ဘေးကလူတွေကလဲ ကြည့်ပြီးရီပါလေရော..ရှက်၏တာ ပြောပါနဲ့ တော့..
ငါ -ိုးမသားလေးတွေ ကျနော်လဲ မြည်တွန်တောက်တီးပြီး ပြန်လာရတယ်ဗျာ။
လိုင်းကားပေါ်မှာ ထောက်လှမ်းရေးပဲ ရှိတယ်မထင်နဲ့ ..ထောက်ခံရေးတွေလဲ ရှိတယ်ဆိုတာ ဒီပို့ စ်နဲ့သတ်သေပြပါဦးမယ်။မနေ့ က ဆူးလေသွားတဲ့ လိုင်းကားပေါ်မှာပေါ့။အလုပ်သမားတွေလား မသိပါဘူး.အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ က တက်လာကော။ကျုပ်ထိုင်ခုံရှေ့ မှာ လာရပ်ပြီးဘာတွေပြောနေကြမှန်းမသိဘူး။နားငြီးတယ်။မှတ်တိုင်တစ်ခုရောက်တော့ နောက်ဆုံးထိုင်ခုံက လူတွေထသွားလို့ ..နင်ထိုင်ငါထိုင်နဲ့ ..စေတနာပိုနေကြပြီး.ပေရပ်ပြီး ကျန်ခဲ့တာ အခြောက်တစ်ကာင်ပါကော။အရှေ့ က ထိုင်ခုံလွတ်တော့လဲ အခြောက်ကလေးက သွားမထိုင်..ပေရပ်နေပြီး ကျုပ်ဘေးက လူ လွတ်တော့မှ ဘေးမှာလာထိုင်ကော..။ထိုင်တာအေးဆေး မထိုင်ပဲ သူ့ ဘေးက ဘော်ဒါနဲ့ သောက်တင်းတုပ်နေလေရဲ့..
အဲတာကြောင့် နင်ဒီမှာပဲ ကပ်ထိုင်နေတာမလား..နင့်အကြောင့်းငါသိတယ်… ဟီး..ဟီး..ဟား..ဟား..
စိတ်ထဲကတော့ ..သောက်ကျိုးနဲ ငါ့ကိုပါ အခြောက်စာရင်းထဲ ဆွဲထည့်နေပြန်ဘိ..ဘေးမှာခရီးသည်တွေလဲရှိသေး..ဒီသောက်အခြောက်တော့ င့ါကိုအာရုံနောက်ဘီ
ကားနဲနဲ ယိမ်းရင်လဲ ဒီသောက်ခြောက် က ပိုယိမ်းပြီးကပ်ကပ်နေလိုက်.သူ့ အဖွဲ့ က .ကြည့်ပြီးရီနေကြလိုက်နဲ့ 
ကျုပ်လဲ အနေကြပ်ပြီး ကြာရင် သောက်ခွက်ထထိုး မိပေတော့မည်မို့နီးစပ်ရာ မှတ်တိုင် အမြန်ဆင်းဖို့ သာ ပြင်ရတော့တာပေါ့။မှတ်တိုင်မရောက်ခင်ကတဲက ကြိုထပြီး အပေါက်ဝသို ပြေးရတော့တယ်.
သြော်..သူတို့ အနွယ်ဝင်တွေလိုထင်နေတာလား မသိပါဘူး ..ဒုက္ခ..ဒီသောက်အခြောက်လုပ်တာနဲ့ ..ငါစုတ်တီးစုတ်ပြတ် ပုံကို ကျန်ခရီးသည်တွေပါ ရိပ်မိကုန်ပြီ။ဘောင်းဘီအစုတ်တို၊တီရှပ်တိုနဲ့ ..ဟိုထွက်ဒီပေါ်တတ်တူးတွေနဲ့ ..အောက်တန်းစားရုပ်..၀ိုင်းကြည့်နေကြလို့ရှက်၏တာ…ပြောပါနဲ့ တော့။
နောက်ခါ လှိုင်သာယာ ဂျော်ဂျော်
ဒါလဲ ကားပေါ်မှာပဲဗျာ..လှိုင်သာယာသွားတဲ့ ဒိုင်နာကားပေါ်မှာပါ
မိုးလဲချုပ်.ကားကလဲ ကြပ်နဲ့ ရယ်..အလုပ်သမားတွေအပြုံလိုက် အိမ်ပြန်ကြချိန်ပေါ့။ကြပ်ပိတ်နေတာပဲ ကားပေါ်မှာ။စီး.ရင်း…စီးရင်း…နဲနဲကြာလာတော့ ဘေးက တစ်ယောက်က လက်ကစားလာရော။သူ့ လက်တစ်ဘက်က ကားတန်းကိုကိုင်.ကျန်တစ်ဘက်က ထမင်းချိုင့်လဲကိုင်ထားလျက်တန်းလန်းနဲ့ ..ပေါင်ကြားရောက်လာပြန်ကော။
အောင်မငှီး..လာကလိနေပါလား..ကျနော်လဲ သူ့ လက်ကိုတစ်လှည့်ကြည့် သူ့ မျက်နှာကို တစ်လှည့်ကြည့်ပြီး ကြပ်ရတဲ့အထဲ ဖင်ကို အနောက်ကို ရသလောက် ရှုံ့ လိုက်ရတယ်။
မောင်ဂျော်ဂျော်လဲ မသိမသာ လက်ပြန်ယုတ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ခဏကြာတော့ လက်က ပြန်ရောက်လာပြန်ကော ထမင်းချိုင့်တန်းလန်းနဲ့ ..လာကိုင်ပြန်ကောဗျာ။ကားကြပ်လို့ဖီးကွေးနေရတဲ့အထဲ ဒင်းကတစ်မှောင့်ဆိုပြီး တောက်တစ်ချက် ခေါက်ပြီး မျက်ခွက်ကို ဘုရှိုးရှိုး လိုက်တယ်။
ပုံစံက နှာခေါင်းကနီပြီး ဇောချွေးတွေတောင် ပြန်နေသေး..လွယ်အိတ်တစ်လုံး၊ထမင်းချိုင့်တစ်ချိုင့်၊ထီးတစ်ချောင်းနဲ့အလုပ်က ပြန်လာတာနေမှာ။ကျုပ်ပေါက်ကွဲနေတာကို မြင်ပြီး မျက်နှာငယ်နဲ တစ်ချက်ကြည့်ပြီး မျက်နှာလွှဲသွားလေရဲ့။
သြော် ကောင်းကောင်း မပြန်၊လုံးရာကပြား..၊ပြန်ခါနီးရိကာ လာယူချင်နေသေး.ဒင်းဒုက္ခလဲ မသေးလှပါလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျက်သရေတုံး ထပ်လာကလိရင်တော့ သောက်ခွက်ရိုက်ပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ကျနော်လဲ မှုံကုပ်ကုပ်လုပ်၍ ဆက်စီးသွားတာ..
တော်သေး…လက်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ..ပြန်သွားလို့ ..ပြဿနာ မတက်ခဲ့တာ။
ထောက်လှမ်းရေးဘ၀ ရောက်တာတောင် ထောက်ခံရေးဘ၀ ကူးပြောင်းချင်နေကြတယ်..စဉ်းစားလို့ ကိုမရပါဘူးလို့ ။ရွာသားအချို့ လဲ ကျနော့်လိုပဲ ကြုံဖူးကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ဒင်းတို့ ကြောင့် များစွာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတာ..စဉ်းစားမိတိုင်း ပေါက်ကွဲမိပါကြောင်း..။
အားလုံးကွတ်တိနည်းပါးလား ကိုပေါက်ပေါ် ရေ…။ ကျွန်တော်လည်း ဒါမျိုး ကိုဂျော်တွေထဲကမှ တစ်ဂျော်ဂျော် နဲ့တော့ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒီအကြောင်းရေးမလို့ အခု ဆရာသမားက ဦးသွားပြီ မရေးတော့ဘူး။ မိန်းမလို့ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ အခြောက်ထက် ယောကျာ်းလိုလိုဘာလိုလိုအခြောက်ကို ပိုလန့်တယ်။ မိန်းမလို ၀တ်ထားတဲ့ ကောင်ကရှောင်လို့ရတယ်လေ..။ ဟိုကောင်တွေကဘာမှန်းမသိ နဲ့ အဲဒီ လိုတွေ ကြုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရင် ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့မသိဘဲ ယောက်ျားခြင်းလာရောနေရင် လာသဘောကောင်းနေရင် ကျွန်တော်က တော့ အခြောက်လို့ပဲမြင်မိနေတော့တာပါပဲ။
ခုခေတ်ကလည်း မိန်းကလေးတွေမှ သတိထားရတော့တာမဟုတ်တော့ဘူး
သူတို့မှာလဲ အသဲနဲ့ပါတဲ့ ချစ်တက်တဲ့ နှလုံးသား၇ှိပါတယ်တဲ့
သူတို့ အချစ်က မိန်းကလေးတွေအချစ်ထက်တောင် ပိုပြီးပေးဆပ်မူတွေများပါတယ်တဲ့
ဒါက ခင်တဲ့ အခြောက်တစ်ယောက်ပြောပြဖူးတဲ့ သူတို့ရင်ထဲက စကားသံလေးတွေပေါ့ ….
အတော်ချောတယ်ထင်တယ်ေ၈ျာ်ဂျော်တွေက လာလာရောနေတာဆိုတော
ချောတယ်မချောတယ်လို့တော့မသိဘူး ။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဆော်ကြည်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ မင်းက ဂျော်ကြည်ဘဲလို့တောင် နာမည်ပေးခံရတယ်။
တောင်ပြုံး ပွဲ နဲ့ အမရပူရ က ပွဲတော် များ အတွက်
ပန်းဆိုးတန်းဘက်မှာ ယောင်္ကျားလို ၀တ်ထားတဲ.ဂေးတစ်ယောက်က အများသုံးသန်.စင်ခန်းထဲစတွေ.ပြီး
လိုက်လာတာကြုံဖူးတယ် ဘယ်ရမလဲ နည်းနည်းဖောပြီး Ruby Mart ကဖွင်.ကာစဆိုတော.
ကော်ဖီဆိုင်မထိုင်ဖူးသေးတာနဲ. ကော်ဖီလိုက်တိုက်ခိုင်းပြီး ပြန်ပြေးလာတာ
ဒါတောင် ဖုန်းဆက်နော် စောင်.နေမယ်က ပြောလိုက်သေးတယ်ဗျ
ခေါ်တာကလည်း ကြောက်စရာကြီး သံလမ်းမှာ တည်းခိုခန်းတွေရှိတယ်တဲ. ပေါ်တင်ကြီးကိုပြောတာ
ဟင်းးးးးးး ဘာတွေမှန်းလည်းမသိဘူး………. စိတ်ပိန်တယ်…….. ပြန်ပြီ ပေါက်ပေါက်ရေ……. ကာကာရေ ရွှေရွှေ ရေ…………
ဦးပေါက်ဖော်ကြီး.. ရွာထဲမှာ အရင်က ဖြိုးက ပြောဖူးတယ်။ ကျားမှန်ရင် ခြောက်တာပဲတဲ့ ရေမရောတဲ့ ကျား မရှိဘူးတဲ့ မသိလို့သာ မဟုတ်ဘူးထင်နေတာတဲ့ မခြောက်တာ မရှိဘူးတဲ့နော်..
မမဆူးက အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲတာပါဗျာ။ ယောက်ျားတိုင်းကို ခြောက်နေတယ်လို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လိင်တူချစ်သူတွေ (ရိုင်းရိုင်းနဲ့ နှိမ့်ချဆက်ဆံပြီး လူဘိန်းပြောနည်းနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် အခြောက် စသဖြင့်ပေါ့) ဆိုတာမျိုးက တခြားလိင်လိုမျိုး ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူတွေ (Transgender) ဆိုရင်က လူတွေရဲ့အမြင်မှာ ထင်သာမြင်သာရှိပေမယ့် ယောက်ျားလိုမျိုး ၀တ်စားထားတဲ့သူတွေ (Gay) တွေကိုဆိုရင် လူတွေက ဘယ်သူက လိင်တူကိုကြိုက်တာပါဆိုပြီး ထင်သာမြင်သာနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ မသိနိုင်ဘူးလေ။ အဲဒီတော့ တချို့က ယောက်ျားစစ်စစ်ကြီး လို့ထင်ရပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာ လိင်တူကိုမှ စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကလည်း ရှိပါသေးတယ်။ (ယောက်ျားစစ်စစ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာ Gender အမြင်တွေ ဖြစ်လာပြန်ရော- အိုကေ ထားလိုက်ပါ ဒါကတစ်ကဒ်ပေါ့)။ ကျနော်ပြောချင်တာက အဲဒီလိုမျိုး သဘောထားကို ပြောချင်တာပါ။
နောက်တစ်ခုက လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတပိုင်းလို့ ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်၊ ဒေါက်တာကင်းဆေးရဲ့ သုတေသနစစ်တမ်းပြုလုပ်ချက်အရ မိမိတို့ရဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှုကို တိုင်းတာနဲ့နေရာမှာ သူက ဘယ်လိုတိုင်းတာလဲ ဆိုရင် ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ တိုင်းတာသွားပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်းတွေကို ၁ ကနေ ၁၀ အထိ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေကို တိုင်းတာရင် နံပတ် ၁ ဆိုရင် လုံးဝကို လိင်တူကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပြီး လိင်ကွဲကို စိတ်မ၀င်စားသူ၊ ၂ ဆိုရင် လိင်တူဖက်ကို စိတ်ဝင်စားတာ ပိုများပြီး လိင်ကွဲကို နည်းနည်းလေး စိတ်ပါသူ၊ ၃ နဲ့ ၄ လည်း လိင်တူဖက်ကို ပိုအားသန်ပြီး လိင်ကွဲကို နည်းနည်းချင်းစီ စိတ်ဝင်စားနိုင်သူ၊ ၅ မှာကျတော့ လိင်တူရော လိင်ကွဲပါ နှစ်မျိုးစလုံးကို တပြိုင်နက်တည်း စိတ်ဝင်စားနိုင်သူ (Bisexual လို့သတ်မှတ်လို့ ရနိုင်တဲ့သူတွေပေါ့)၊ ၆ မှာကျတော့ လိင်တူကိုလည်း စိတ်ဝင်စားပေမယ့် လိင်ကွဲဖက်ကို စိတ်ဝင်စားမှု ပိုအားသန်တဲ့သူ၊ ၇ ကနေ ၉ အထိ လိင်ကွဲဖက်ကို ပိုအားသန်တဲ့သူ (ဆိုပေမယ့် ဒီလူတွေက လိင်တူနဲ့လည်း ဆက်ဆက်ဖူးတဲ့သူတွေ)၊ ၁၀ ကျတော့ လုံးဝကို လိင်ကွဲကိုပဲ စိတ်ဝင်စားသူ ဆိုပြီး သုတေသန ပြုလုပ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီသုတေသနကို အခြေပြုပြီး ဒီဆိုဒ်ထဲက ကိုကို မမတွေ ဘယ်နေရာမှာ ကိုယ်ကရှိနိုင်လဲဆိုတာ သူများကိုညာပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မညာတမ်း တိုင်းတာကြည့်ပေါ့နော်၊ လိင်တူချစ်သူ လူဦးရေဆိုတာက တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင် လူဦးရေရဲ့ ဆယ်ပုံပုံမှ တစ်ပုံစာ မပြည့်နိုင်လောက်တဲ့ အရာပါ။ အဲဒီတော့ အများသူငါတွေ စဉ်းစားနေတဲ့ မျိုးဆက်မဖြန့်နိုင်ဘူး၊ ကမ္ဘာပျက်သွားတော့မယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု ပျက်သွားတော့မယ် စသဖြင့် အများကြီးပါပဲ အဲလိုမျိုး အတွေးအခေါ်တွေက ဘယ်လိုလုပ် ဒီလူနည်းစုလေးကြောင့် ဖြစ်ပွားသွားနိုင်မလဲ။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် အခြေထွက်လာမှာပါ။ စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာလဲ တဖက်သက်မဟုတ်ပဲ သမာသမတ်ကျတဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် အကြိုးရှိနိုင်မယ့် နည်းလမ်းမျိုးဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်း ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော် အဲဒီတုန်းက ကျနော့်ကိုလာလုပ်တဲ့သူကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပဲ ပြန်ပြုံးပြပြီးတော့ သူ့အနားကိုကပ်ပြီး ကျနော် အဲဒီလိုလုပ်တဲ့ အပြုအမူကို မကြိုက်ပါဘူးလို့ တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ ကျနော်ထင်တာက ဒီလိုမျိုး လုပ်တဲ့အပြုမူက လိင်တူချစ်သူတွေမှ လုပ်တဲ့အပြုအမူ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် မြင်ဖူးတဲ့ တခြား လိင်ကွဲချစ်သူတွေလုပ်တဲ့ဟာတွေလည်း သက်သေအထောက်အထားနဲ့ကတွ အများအပြားရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ လူတယောက်ချင်းစီရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ အပြုအမူနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းဖို့ ဆိုတာကလည်း ပညာရေးကောင်းမွန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အခြားလိင်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲဝတ်စားဆင်ယင်ထားတဲ့ Transgender တွေကိုကြည့်ပါ။ သူတို့ ကျောင်းမှာ ဘယ်လိုနှိမ်ခံရပြီး ဘယ်နှယ်ယောက်လောက် ပညာရေးမှာ ကောင်းမွန်စွာ သင်ကြားအောင်မြင်ပြီး ကျော်ကြားနေတဲ့သူတွေ ရှိခဲ့ဖူးလဲ။ ဒါကလည်း ခွဲခြားနှိမ့်ချချင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းကြောင့် အများကြီးပါဝင်နေပါတယ်။ ပညာမတတ်တော့ တွေးခေါ်နိုင်မှု ဆင်ခြင်စဉ်းစားနိုင်မှု ရှိနိုင်ပါတော့မလား။ Gay တွေထဲမှာ ပညာတတ် ရာထူးဂုဏ်ထူးတွေ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့တွေက အများသူငှာတွေ မြင်မြင်သာသာ မရှိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို သိသိသာသာကြီး မခံစားရပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စိတ်အတွင်းပိုင်းမှာတော့ အမြဲတမ်း စိတ်လုံခြုံမှုကို မခံစားရတာ ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။ ဒါတွေဟာ ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်နေရတာလဲ။ ကျနော်တို့ရဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းကြောင့် မဟုတ်လား။ အဲဒါဆိုရင် ဒီဟာတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင် ဒီလူတွေချည်းပဲ ပြောင်းလဲနေလို့ မရသလို ပတ်ဝန်းကျင် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ကျနော်ကတော့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း ဒီလိုမျိုး လူတွေကိုဖယ်ကျဉ်ထားမယ် လက်တွဲမခေါ်ဘူးဆိုရင် ဒီလူတွေကလည်း ဒီထက်ပိုပြီးအခြေအနေဆိုပြီးတော့ အခုရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးမှာလို စိတ်ညစ်စရာ အမြင်ကတ်စရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ ဘယ်တော့မှ တိုးတက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာလည်း နေရာတိုင်းမှာ လိင်တူချစ်သူတွေက ရှိတဲ့အတွက် အားလုံးအတူတကွ နားလည်မှုရှိစွာနဲ့ တယောက်ကိုတယောက် စာနာနားလည်ပေးပြီး လက်တွေခေါ်မယ်ဆိုရင် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ထူထောင်ဖို့ မေတ္တာပြုချင်ပါတယ်။
အမှန်တကယ်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေး ရေးပေးတဲ့ အစ်ကိုကို အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ဖော်ပြမှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာ လုပ်ရမယ်လို့ အားလုံးစဉ်းစားမိလာတာပေါ့။
ရွာထဲမှာလည်း မိုက်ကယ်ဂျော်လကီအုပေါင်ဆိုတာ တယောက်ရှိတယ်။ နာမည်ရင်းကတော့ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု။ ဘီယာသောက်ဖို့ဆို ကိုယ်ပိုင်ဥကိုပေါင်နှံသူမို့ နာမည်သစ်တွင်သွားတာ…။
မခံစားဘူးတော့ ကိုယ်ချင်းမစာဘီ ဆိုသလိုဖြစ်နေဘီ
ယားကျိယားကျိနဲ့ တော်တော် ကောင်းတဲ့အရသာ ဖြစ်ပုံပေါ်တယ်နော
လိင်တူချစ်သူတွေ (ရိုင်းရိုင်းနဲ့ နှိမ့်ချဆက်ဆံပြီး လူဘိန်းပြောနည်းနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် အခြောက် စသဖြင့်ပေါ့) ဆိုတာမျိုးက တခြားလိင်လိုမျိုး ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူတွေ (Transgender) ဆိုရင်က လူတွေရဲ့အမြင်မှာ ထင်သာမြင်သာရှိပေမယ့် ယောက်ျားလိုမျိုး ၀တ်စားထားတဲ့သူတွေ (Gay) တွေကိုဆိုရင် လူတွေက ဘယ်သူက လိင်တူကိုကြိုက်တာပါဆိုပြီး ထင်သာမြင်သာနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ မသိနိုင်ဘူးလေ။ အဲဒီတော့ တချို့က ယောက်ျားစစ်စစ်ကြီး လို့ထင်ရပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာ လိင်တူကိုမှ စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကလည်း ရှိပါသေးတယ်။ (ယောက်ျားစစ်စစ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာ Gender အမြင်တွေ ဖြစ်လာပြန်ရော- အိုကေ ထားလိုက်ပါ ဒါကတစ်ကဒ်ပေါ့)။ ကျနော်ပြောချင်တာက အဲဒီလိုမျိုး သဘောထားကို ပြောချင်တာပါ။
ကျွန်တော်လည်း ကြုံဖူးတယ်ဗျ …
သိမ်ဖြူလမ်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း ထောင့်က အများသုံးအိမ်သာမှာ ..
ကောင်မလေးနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း ရှူရှူးပေါက်ချင်တာနဲ့ ၀င်လိုက်မိတာ ..
အားး … စဉ်းစားမိတာနဲ့ ကြက်သိန်းတောင်ထတယ် ..
ကျွန်တော်လည်း အိမ်သာထဲက ပြန်အထွက် …….
မနည်းပြန်တက်ပြေးလိုက်ရတယ် … ဟူးးးးးးး မောလိုက်တာဗျာ ..
မြန်မာပြည်ရဲ့ ဂေးတွေက.. လိင်တူချင်းချစ်တယ်ဆိုလည်း.. သတ်သတ်မှတ်မှတ်.. တယောက်ဆိုတယောက်မဟုတ်ပဲ… ယောက်ျားတော်တော်များများကို… တားဂတ်ထားနေတာမျိုးတွေကြောင့်… အထင်သေးခံရတာလို့ ထင်မိတယ်..။
သိသလောက်တော့.. ယူအက်စ်က ဂေးတွေက..သူ့အဖေါ်နဲ့သူ… တခြားသူတွေအပေါ်လိုက်စိတ်ဝင်စားတာမျိုး နည်းတယ်ထင်မိတယ်..။
သစ္စာဆိုတာမျိုးက.. ဂေးမှာလည်း ရှိသင့်တယ် မဟုတ်လား..။
ဟုတ်တယ် အစ်ကို၊ သစ္စာဆိုတာမျိုးက လူသားဆိုတဲ့ လူတိုင်းကိုယ်စီမှာ ရှိသင့်တယ်။ အဲဒါကို ကျနော်လည်း ရာနှုန်းအပြည့် ထောင့်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက လူတကိုယ် စိတ်တမျိုးတွေလေ။ ယူအက်စ်က ဂေးတွေက အတွေးအခေါ်ပိုင်းပဲ ဆိုမလား ပညာပိုင်းပဲဆိုမလား မြင့်တယ်လို့ ကျနော်ကတော့ ထင်တယ်။ အားလုံးမဟုတ်ဘူးနော်။ ပြီးတော့ သူတို့ဆီမှာက ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ ဆိုပေမယ့် လွတ်လပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေ ရှိသေးတယ်။ ပြီးတော့ တယောက်နဲ့တယောက် အဆင့်အတန်းခွဲခြားတာတွေ မျိုးကသိပ်မရှိဘူးလေ။ မြန်မာပြည်မှာကြည့်လိုက် ဂေး တွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာကိုက အဆင့်အတန်း ခွဲခြားနေကြတယ်လေ။ အဲဆို ကျန်တဲ့သူတွေက ပိုလို့တောင် ခွဲခြားကြတော့မှာပေါ့။ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဂေးတွေအတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နေလို့ရတဲ့ နေရာမျိုးမရှိဘူး။ အဲလိုဆိုတော့ မြေအောက်အိမ်သာတို့လို့ တခြားနေရာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲလိုမျိုးနေရာတွေမှာ သူတို့ကျက်စားတော့မှာပေါ့။ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အရမ်းကို အန္တရာယ်များပြားလွန်းပါတယ်။ အဲဒီသူတို့ကျက်စားတဲ့နေရာကို မသိပဲ ၀င်သွားမိတဲ့သူဆိုရင်တော့ သူတို့ကလည်း သူတို့လိုမျိုးပဲထင်ပြီးတော့ ၀ိုက်တော့မှာပဲပေါ့ဗျာ။ မြန်မာဂေးတွေမှာလည်း တယောက်ဆိုတယောက် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ချစ်ကြိုက်တဲ့သူ ရှိပါတယ်ဗျ။ လူတွေဆိုတာမျိုးက ပုန်းလုပ်ရလေ ပိုလုပ်ချင်လေလေ။ အဲဒီတော့ လွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာလည်း မဆန်းတော့ဘူးပေါ့။
There is the most famous Gay festival ( Mardi Gras ) in Sydney around every Feb/march.